Tongasoa eto amin'ny manelatselatra anaty ala feno firavaka volamena ao amin'ny Golden Jungle petra-bola maimaim-poana tsy spins Casino.Eto famantarana rehetra hampahatsiaro anareo ny fanjakana mandrakizay antitra ny mpanjaka Indiana. Izy io dia malaza hoe midadasika izy ireo nanana rakitra volamena toy ny sabatra, headpieces, emeraoda vava vola aminy,, boaty, volamena natao sokitra teo amin'ny rindrina, sns. efa faly? Tsy maintsy ho! Toa tahaka ny harena dia amin'ny alehanao ianao koa!
Momba ny developer ny Golden Jungle
IGT na ny iraisam-pirenena Teknolojia Gaming no indray hita ny mettle ao amin'ny Golden Jungle petra-bola maimaim-poana tsy spins Casino. The taona 2006 no nanamarika ny fiandohan'ny IGT ny asa any Amerika eo ambany ny anaran 'GTech orinasa. Izany America-monina vao haingana orinasa nahazo ny anarany amin'ny 2015 when Gtech Corporation acquired IGT and took on its name for carrying on all its future operations Industry.
In Golden Jungle petra-bola maimaim-poana tsy spins Casino, ny hilokana tandavan eo 50p ny namoly ny £ 1500 ary nilalao amin'ny 5 reels. Misy 50 paylines mba mikendry ny mandresy tsikombakomba. Fanehoana an'ohatra ny 'harena', dia ahitana firavaka vato, artefacts, jewellery boxes, ary elefanta sarivongana. Ny tombony ambony marika dia ny tigra manolo rehetra, afa-tsy ny mariky ny bibidia sy ny aelezo. masiaka 2 marika avo Tiger mitarika ho lehibe kokoa Fandresena rehefa miseho amin'ny tsirairay ny dimy reels. Ny valisoa ambony indrindra dia niakatra ho any 40 fotoana ny tsatòka. rehetra, tokony atao dia toerana 5 ny tigra eo amin'ny tsirairay ny reels.
Ny volamena vavahadin'ny tempoly aelezo fanehoana an'ohatra mitondra miaraka maimaim-poana ho anareo spins manodidina.
Misy 2 ny lafiny lehibe amin'ny petra-bola maimaim-poana tsy spins Casino lalao: The Wild fitehenan-tanana, 4 mitendry endri-javatra mila anao mba hanangona 4 Idol Statue fanehoana an'ohatra. Rehefa mitranga izany, iray amin'ireo reels ho mihidy miraingiraingy azon'ny bibidia. Tsy mijanona toy izany ho an'ny 4 more spins. Free Spins Bonus endri-javatra no mahatonga ny mahazo, fara fahakeliny 3-5 aelezo fanehoana an'ohatra. Ao amin'ny Free spins tombony, ianao dia nomena ny safidy mba mifidy ny isan'ny spins maimaim-poana ianao dia te-hanao sy hiverina manokana maro reels ho mihidy bibidia reels.
3 manahaka: 15 maimaim-poana spins amin'ny miraingiraingy azon'ny 3 rehefa ny mihidy
6 maimaim-poana spins amin'ny reels 2 ary 4 rehefa mihidy
2 maimaim-poana spins amin'ny reels 1, 3 ary 5 rehefa mihidy
4 manahaka: 30 maimaim-poana spins amin'ny miraingiraingy azon'ny 3 rehefa ny mihidy
12 maimaim-poana spins amin'ny reels 2 ary 4 rehefa mihidy
4 maimaim-poana spins amin'ny reels 1, 3 ary 5 rehefa mihidy
5 manahaka: 75 maimaim-poana spins amin'ny miraingiraingy azon'ny 3 rehefa ny mihidy
30 maimaim-poana spins amin'ny reels 2 ary 4 rehefa mihidy
12 maimaim-poana spins amin'ny reels 1, 3 ary 5 rehefa mihidy
Ny hoe ambany ny mpanelanelana amin'ny tontolo hampifandrafy lalao, ny petra-bola maimaim-poana tsy spins Casino dia tena nisafidy ny mety-nisalasala mpilalao izay te laze fotsiny manodidina amin'ny Casino slot sy manana fotoana mora.